मेस्सीले तोड्न सक्लान् रोनाल्डोको कीर्तिमान ?::Leading News Portal From Nepal.
मेस्सीले तोड्न सक्लान् रोनाल्डोको कीर्तिमान ?
युरोपियन फुटबलको ठूलो लिग च्याम्पियन्स लिग फुटबलमा गोल गर्ने धेरै खेलाडीको लक्ष्य हुन्छ । धेरै खेलाडीहरु च्याम्पियन्स लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेकै आधारमा युरोपका ठूला क्लबहरुले खेलाडीलाई अनुबन्धन गर्ने गर्दछन् ।
यस्तै बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सी च्याम्पियन्स लिग फुटबलका सर्वाधिक गोल गर्ने खेलाडीको दोस्रो नम्बरमा पर्दछन् । युभेन्ट्सका स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो च्याम्पियन्स लिग फुटबलका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् ।
विश्व फुटबलका उत्कृष्ट खेलाडीको रुपमा रहेका दुबै खेलाडी ला लिगा र च्याम्पियन्स लिग फुटबलका सर्वाधिक गोलकर्ता हुन् । च्याम्पियन्स लिग फुटबलका सर्वाधिक गोलकर्ता रोनाल्डोले १६९ खेल खेल्दै १२८ गोल गरेका छन् ।
उनले म्यान्चेस्टर युनाइटेड, रियल मड्रिड र युभेन्ट्समा गरेर १२८ गोलको कीर्तिमानी कायम गरेका छन् । रोनाल्डोपछि दोस्रो स्थानमा रहेका मेस्सीले ११४ गोल गरेका छन् । मेस्सीले १४१ खेलमा ११४ गोल पूरा गरेका हुन् ।
रोनाल्डोको कीर्तिमानी तोड्न अब मेस्सीले १५ गोल गरे पुग्नेछ । तर, रोनाल्डो पनि उत्कृष्ट फममा रहेकाले मेस्सीले उनको गोल सख्यालाई भेट्न समय भने लाग्नेछ । यदि मेस्सीले रोनाल्डोको कीर्तिमानी तोडेमा उनी ला लिगा र च्याम्पियन्स लिगका सर्वाधिक गोलकर्ता हुनेछन् ।